Fahatanterahana IDS: Serivisy fanatobiana entana sy fanatanterahana » Martech Zone
Taona vitsivitsy lasa izay dia afaka nanao fitsidihana ny Fampiasana IDS eto amin'ny Midwestwest. Mpanokatra maso ho ahy izy io satria tsy mbola nahita ny fandrosoana nitranga tamin'ny indostrian'ny lozisialy, trano fanatobiana entana ary fanatanterahana aho. Mandrosoa haingana amin'ity taona ity ary nanana adihevitra mahavariana niaraka tamin'ny mpandraharaha amin'ny ambaratonga faharoa aho izay nizara tamin'izy ireo momba ny indostrian'ny ecommerce.
Tsy tsapan'ny olona fa misy orinasa virtoaly miasa amin'izao fotoana izao izay tsy tantanan'ny orinasa akory ny vokatra. Misy orinasa toa IDS, izay mitantana ny lafiny rehetra amin'ny fahazoana vokatra amin'ny mpanjifanao (ary miverina raha misy ny fiverenana). Ireo fandefasana dia miseho mivantana avy amin'ny mpanamboatra - fa ny IDS kosa dia mitahiry faritra.
Ny kaomandy ao amin'ny tranokalan'ny mpivarotra dia mandeha mivantana any amin'ny foibe fanatanterahana izay amboarana tsara sy ampitaina amin'ny mpanjifa. Fandrosoana mahavariana amin'ny haitao izay araraotin'ny mpivarotra lehibe sy ny lehibe.
Ireo mpivarotra ambongadiny lehibe dia afaka manararaotra ny IDS amin'ny fampiroboroboana ny fitomboana na ny tsimok'aretina fangatahana. Ireo mpivarotra enta-madinika dia afaka mampiasa IDS hatrany aloha ka hatrany aoriana amin'ny trano fitahirizan-dry zareo, ny fizarana ary ny fiverenany. Amin'ny alàlan'ny dingana rehetra, ny IDS dia manamarika ny firotsahana ho an'ny orinasa.
Noho ny fomba fanavaozana sy ny fahaizan'ny mpiasa sy ny rafitra misy azy dia nomena loka ny IDS taona vitsivitsy lasa izay tany Indianapolis. Ny toerana afovoan'i Indianapolis any afovoan-tany Andrefana, toetrandro azo vinavinaina, ary vidim-piainana ambany no mahatonga azy ho toerana mety ho an'ireo ivon-toeram-panatanterahana toy izao
Amin'ny maha mpivarotra antsika dia zava-dehibe ny fahafantarantsika fa mivoatra ny orinasa. Ny zava-misy fa afaka mamolavola spec amin'ny digital ianao, manamboatra azy any ampitan-dranomasina, mitahiry izany afovoany ary mizara azy nefa tsy mikasika ny orinasanao akory dia mahatalanjona ary manokatra varavarana taonina ho an'ny teknolojia vaovao.
Tags: IDfahatanterahan'ny idsIndianaIndianapolisfampitaovanalozisialy mihodina
Inona avy ireo, nahoana no ampiasaina, ary ahoana no fomba hamoronana Personas ho an'ny mpividy
Andramo ireo karatra ao amin'ny YouTube hampitomboana ny fiaraha-mientana amin'ny mpijery